12 Na ɛdefa honhom mu akyɛde+ no ho no, anuanom, mempɛ sɛ mo ani pa so. 2 Munim sɛ bere a moyɛ amanaman mufo+ no, wɔnam akwan horow so twee mo kɔɔ abosom+ a wɔnkasa+ ho. 3 Enti mepɛ sɛ muhu sɛ obiara nni hɔ a ɔde Onyankopɔn honhom kasa a ɔka sɛ: “Yesu yɛ abusude!”+ na obiara ntumi nka sɛ: “Yesu ne Awurade!” gye sɛ ɛnam honhom kronkron so.+ 4 Akyɛde no gu ahorow,+ nanso honhom koro+ no ara na ɛwɔ hɔ; 5 na ɔsom adwuma gu ahorow,+ nanso Awurade koro+ na ɔwɔ hɔ; 6 na dwumadi gu ahorow,+ nanso Onyankopɔn koro+ no ara na odi dwuma no nyinaa wɔ nnipa nyinaa mu.+ 7 Na atirimpɔw pa bi nti na wɔda honhom no adi wɔ obiara mu.+ 8 Wɔnam honhom no so ma obi nyansa-kasa,+ na wɔma ɔfoforo nso nimdeɛ-kasa+ denam honhom koro no ara so, 9 ɔfoforo nso nam honhom koro no ara so nya gyidi,+ na ɔfoforo nso nam honhom biako no ara so nya ayaresa akyɛde,+ 10 na obi nso tumi yɛ ahoɔdenne,+ ɔfoforo nso nya nkɔmhyɛ,+ ɔfoforo nso nya honhom mu nsɛm+ mu nhumu,+ ɔfoforo nso nya kasa horow,+ na ɔfoforo nso nya kasa horow nkyerɛase.+ 11 Nanso honhom koro pɛ no ara na edi dwuma yi nyinaa,+ na ɛde obiara de ma+ no sɛnea ɛpɛ.+ 12 Na nipadua no yɛ biako nanso ɛwɔ akwaa pii, na sɛnea saa nipadua no akwaa dɔɔso, nanso ne nyinaa yɛ nipadua koro+ no, saa ara na Kristo nso te.+ 13 Asɛm no ne sɛ, Yudafo oo, Helafo oo, nkoa oo, adehye oo, honhom biako so na wɔnam bɔɔ yɛn nyinaa asu+ kɔɔ nipadua biako mu, na wɔmaa yɛn nyinaa nom+ honhom biako. 14 Nokwarem no, nipadua no nyɛ kwaa biako; ɛdɔɔso.+ 15 Sɛ ɛnan ka sɛ: “Menyɛ nsa nti menka nipadua no ho” a, eyi nkyerɛ sɛ ɛnka nipadua no ho.+ 16 Na sɛ asõ ka sɛ: “Menyɛ aniwa nti menka nipadua no ho” a, eyi nkyerɛ sɛ ɛnka nipadua no ho.+ 17 Sɛ nipadua nyinaa yɛ aniwa a, anka nea wɔde te asɛm wɔ he? Sɛ ne nyinaa yɛ nea wɔde te asɛm a, anka nea wɔde te hua wɔ he? 18 Afei Onyankopɔn de akwaa yi mu biara ahyɛ nipadua no mu sɛnea ɔpɛ.+ 19 Sɛ ne nyinaa yɛ kwaa biako+ a, anka nipadua no wɔ he? 20 Nanso akwaa pii na ɛwɔ hɔ,+ na nipadua no de, ɛyɛ biako. 21 Aniwa ntumi nka nkyerɛ nsa sɛ: “Minhia wo”; na saa ara na eti ntumi nka nkyerɛ ɛnan sɛ: “Minhia wo.” 22 Na mmom nea ɛte ara ne sɛ nipadua mu akwaa a ayɛ sɛ ɛyɛ mmerɛw+ no na ɛho hia, 23 na nipadua mu akwaa a yesusuw sɛ enni nidi no, ɛno na yɛde nidi pii hyehyɛ+ no, na akwaa a ɛnyɛ fɛ no na enya ahokeka pii, 24 na yɛn akwaa a ɛyɛ fɛ no nhia hwee. Nanso Onyankopɔn hyehyɛɛ nipadua no de nidi pii maa akwaa a enni bi no, 25 sɛnea ɛbɛyɛ a mpaapaemu biara remma nipadua no mu na mmom akwaa no benya adwenkoro ama wɔn ho wɔn ho.+ 26 Na sɛ kwaa biako hu amane a, akwaa a aka no nyinaa hu amane+ bi; na sɛ wɔhyɛ kwaa bi anuonyam+ a, akwaa a aka no nyinaa ne no di ahurusi.+ 27 Moyɛ Kristo nipadua ne akwaa mmiako mmiako.+ 28 Na Onyankopɔn de ankorankoro asisi hɔ asafo no mu,+ nea edi kan ne asomafo;+ nea ɛto so abien, adiyifo;+ abiɛsa, akyerɛkyerɛfo;+ nea edi hɔ bio ne ahoɔdenne;+ afei ayaresa+ akyɛde; ɔsom a wɔde boa afoforo,+ sɛnea wɔtoto nneɛma yiye,+ ne kasa horow.+ 29 Nnipa nyinaa na wɔyɛ asomafo anaa? Nnipa nyinaa na wɔyɛ adiyifo? Nnipa nyinaa na wɔyɛ akyerɛkyerɛfo? Nnipa nyinaa na wɔyɛ ahoɔdenne anaa? 30 Obiara na ɔwɔ ayaresa akyɛde no anaa? Obiara na ɔka kasa horow?+ Obiara na ɔkyerɛ nsɛm ase anaa?+ 31 Nanso mommɔ mmɔden nhwehwɛ akyɛde akɛse+ no. Na afei mɛkyerɛ mo ɔkwan a ɛkyɛn so.+